Sawirro: Rooble iyo madax goboleedyada oo saxiixay heshiiska doorashada – Benaadir News Network
Sawirro: Rooble iyo madax goboleedyada oo saxiixay heshiiska doorashada
Muqdisho (Benaadir News) – Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa goordhoweyd saxiixay heshiiskii doorashada ee mudada badan uu ka taagna khilaafku.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo hadal ka jeediyey xaflada xiritaanka shirka golaha wada-tashiga qaran ee dhamaystirka heshiiskii 17-kii September ayaa u mahad-celiyey dhammaan dhinacyada ay qusaysay arrinta doorashada.
Waxa uu sheegay in madaxdu muujiyeen tanaasul, u-turid, iyo in danta dalka laga hormariyo tan gaarka ah, waxana uu si gaar ah ugu mahadceliyey Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday, Madaxda dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta, Beesha Caalamka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyed.
Rooble ayaa shaaciyey in laga heshiiyey dhammaan qodobadii lagu kala aragtida duwanaa, sida arrinta gobolka Gedo, hannaanka doorashada gobollada Waqooyi, turxaan bixinta qaab-dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad-gobleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka.
Ra’iisal wasaaraha ayaa ballan-qaaday in xukuumaddiisu ay dadaal walba ku bixinayso sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hufan oo nabdoon.
Sidoo kale waxa uu ku baaqay in dhammaan dhinacyada daneeyayaasha doorashada iyo bulshada Soomaaliyeed ay qaybtooda ka qaataan sidii ay loo hirgelin lahaa doorashada, islamarkaana uu dalku uga baxi lahaa caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ku geedaaman.
Ra’iisal wasaaraha ayaa ugu dambeyntiina sheegay in xukuumaddiisu ay xil iska saarayso ilaalinta qoondada Haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin goleyaasha dowladda.
Previous Aqriso: Qodobada heshiiska doorashada oo dhameystiran
Next Yaa soo xiraya shirka wada-tashiga doorashooyinka?